Iilwandle zasePuerto de Santa María: ukusuka eLa Puntilla ukuya eLa Calita | Uhambo lweNdaba
Iilwandle zasePuerto de Santa María
ULuis Martinez | 29/04/2022 12:00 | España, Iilwandle
Las iilwandle zasePuerto de Santa Maria Baphakathi kwezona zibalaseleyo eSpain. Azibandakanyi ilize kwizinto ezixabisekileyo Ibhayi yaseCadiz ecaleni kwezo zaseSan Fernando, UChiclana de la Frontera okanye iZibuko laseRoyal. Zonke zinesanti ecikizekileyo yegolide enamanzi acwengileyo.
Zizonke, kukho iikhilomitha ezilishumi elinesithandathu zeelwandle ezihlanjwe yi Ulwandlekazi lweAtlantic ezikunika zonke izinto eziluncedo kunye neenkonzo. Ukuba ukongeza kuyo yonke le nto imozulu yendawo, ihlale imnandi kunye nayo iiyure ezininzi zelanga, unazo zonke izithako zokunandipha iilwandle zasePuerto de Santa María. Ukuze ukhethe lowo uthanda kakhulu, siza kudlula kubo kunye nawe.
1 Ulwandle lwasePuntilla
3 ISanta Catalina, enye yeelwandle zasePuerto de Santa María ilungele ukusefa umoya
4 Ibhanti yaseLevante
5 Ulwandle lwaseFuentebravia
6 Ulwandle lwaseValdelagrana
7 Udonga kunye neLa Cove
8 Ngaba likho ixesha elilungileyo lokonwabela iilwandle zasePuerto de Santa María?
9 Yintoni onokuyibona ePuerto de Santa María?
Ikhefu elisuka kunxweme lwasePuntilla
Yakhiwe ngomlomo we Umlambo waseGuadalete kunye ulwandle lwasecolora, iphantse ibe ngamakhulu alithoba eemitha ubude kunye nobubanzi obuyi-avareji malunga namashumi alithoba. Ukuba kufutshane nedolophu, idume kakhulu. Kodwa ikwakufuphi amahlathi epine kunye neendunduma zaseSan Antón, apho uya kufumana indawo yokukhempa.
Kwakhona, uphawu lwayo lolwandle lwasezidolophini luthetha ukuba linazo zonke iinkonzo. Ineqela lokucupha kunye nelohlangulo elinezikhephe kunye nenqwelo yezigulana ngeempelaveki. Ikwabonelela ngezindlu zangasese kunye neeshawari, iindawo zemidlalo kunye nekiti yoncedo lokuqala. Ekugqibeleni, iye yahlengahlengisa ukufikelela kwabantu abakhubazekileyo kunye nezitulo ezikhethekileyo ukuze bahlambe.
Yiyo, ngokuchanekileyo, ecaleni kweyangaphambili, njengoko ikwabizwa ngokuba yiColorá. Ngoko ke, kuphakathi Umtya wentambo y IPuerto Sherry, i-marina entle yezemidlalo kunye neyokhenketho yasePuerto de Santa María. Ungafikelela kule ndawo inesanti ngeAvenida de la Libertad.
Imalunga namakhulu asibhozo eemitha ubude kunye ne-avareji yobubanzi obulishumi elinesine. Ngokunjalo, ikunika zonke iinkonzo zococeko kunye neeshawari. Uya kuba nomdla wokwazi ukuba izindlu a indawo yezinto zakudala I-Archaic Lower Paleolithic. Ukuba ufuna ukubona iziqwenga ezifunyenwe kuyo, uya kuzifumana kwi UMyuziyam kamasipala ukusuka ePuerto de Santa Maria.
ISanta Catalina, enye yeelwandle zasePuerto de Santa María ifanelekile umoya
Ulwandle lwaseSanta Catalina
Kuko, kunye nalawo aseLevante naseValdelagrana, esiza kuthetha ngawo kamva, olona lwandle lukhulu phakathi kwezo zale dolophu yaseAndalusi. Imalunga namawaka amathathu anekhulu leemitha ubude namashumi amane ububanzi. Ukongeza, ibandakanya iisanti ezininzi ezincinci. Ngokuthe ngqo ezo zeVistahermosa, unonkala obomvu, i-El Buzo, i-El Ancla kunye ne-Las Redes.
Ikwanazo zonke iinkonzo onokuthi uzifune. Phakathi kwabo, abagcini bokuphila abanezikhephe kunye neemboniselo, ikiti yoncedo lokuqala, izindlu zangasese kunye neeshawari. Ulwandle lukwimo ye-cordon kwaye unako ukufikelela kuyo zombini ukusuka kwindlela ye-Rota kunye nakwiidolophu ezikuloo ndawo.
Njengomdla wokwazi, siya kukuxelela ukuba amanzi ayo abandayo kunalawo amanye amanxweme eBhayi yaseCádiz. Kodwa ngaphezu kwakho konke, ukuba uyathanda umoya okanye kitesurf, I-Santa Catalina ifanelekile ukuba uziqhelanise zombini ngenxa yemozulu yayo kunye namaza ayo.
Ubume obunomtsalane beLevante beach
Phakathi kweelwandle zasePuerto de Santa María, oku kubonisa ukonwaba kwendalo, ekubeni isembindini wepaki iBahía de Cádiz. Enyanisweni, idibanisa iindawo zomgxobhozo kwinxalenye yomlomo woMlambo iSan Pedro kunye nezinye iindunduma.
Ngamawaka amane eemitha ezikwere ubude kwaye phantse ikhulu kububanzi obuphakathi, inendawo encinci ye-naturism. Ikwafanelekile ukuziqhelanisa nemidlalo yasemanzini efana nokusefa. Ngakolunye uhlangothi, ukuba kwipaki yendalo, kuya kufuneka uhambe okanye uhambe ngebhayisikili kuyo (inendawo yokuyimisa).
Ngokufanayo, ukusuka elunxwemeni eziliqela Iindlela zokunyuka intaba njengalowo uthatha ithuba lomzila kaloliwe omdala ukusuka eJerez ukuya eTrocadero, leyo, ngendlela, eyokuqala e-Andalusia. Abaliqela ukhenketho lweendawo zembali kule ndawo. Phakathi kwezi iiflethi zetyuwa ephakathi I-Algaida, indawo apho umkhosi we Napoleon ngexesha leMfazwe ye-Independence okanye itonela yeNkampani yakudala ye-Andalusian Steel.
Ekugqibeleni, ulwandle lwaseLevante lunempilo, i-lifeguard kunye neenkonzo zokuhlangula, kunye neeshawa. Kodwa, okona kubaluleke kakhulu, izindlu zangasese zilungelelaniswe kubantu abanokwahluka okusebenzayo.
Imalunga namakhulu amahlanu eemitha ubude namashumi amane ububanzi. Kodwa inendawo yokuphumla yamawaka amahlanu eemitha ezikwere. Ibekwe emazantsi eweni, phakathi kwe Rota Naval Base kunye nokufudukela kwabantu ezidolophini okuthathe igama lako.
Ungafikelela kuyo ngokuhamba kwipromenade kwaye ilungiselelwe abantu abanolwahlukano olusebenzayo. Ikwanayo nezindlu zangasese kunye neeshawari, abahlanguli, indawo yokupaka iibhayisikile kunye ne ibha yolwandle. Konke oku kuyenza ixatyiswe kakhulu ngabakhenkethi belizwe kunye nabo bafika bevela ngaphandle kweSpain.
IValdelagrana, enye yeelwandle ezilungileyo kakhulu ePuerto de Santa María
Ibekwe phakathi komlomo we Umlambo waseGuadalete kunye Ulwandle lwaseLevante, esele sinixelele ngayo. Inobude obumalunga namawaka amabini eemitha kunye nobubanzi obumalunga namashumi asixhenxe. Imile okweqokobhe kwaye ihamba phakathi kwayo. uhambo olungezantsi malunga newaka elinamakhulu amahlanu eemitha apho, ukongeza ekuhambeni, unokonwabela imivalo kunye neeresityu ezininzi.
Noko ke, kukwanjalo iindlela zokuhamba ngebhayisikile ezikuthatha ukutyhutyha indawo entle yeeflethi zetyuwa. Ilungele ukuphumla, kodwa kunye nokuziqhelanisa umoya kunye kitesurf. Ikwakuvumela ukuba ukonwabele iimbono ezintle zesixeko saseCádiz.
Ngokuphathelele ukuphumla, kufuneka wazi ukuba ineehammocks kunye neambrela ezirentwayo. Ikwanazo nezitulo zokuhlambela ezilungiselelwe abantu abanolwahlukano olusebenzayo kunye neenkonzo zomlindi kunye nerenti yezikhephe ezinyovwayo. Ungafikelela kulwandle lwaseValdelagrana zombini ngeenyawo nangebhayisekile okanye ecaleni kwendlela ye-CA-32, ukuba uza ngemoto.
Udonga kunye neLa Cove
Sidibanisa ezi lwandle zimbini kuba zohlulwe kuphela ngamabhodlo e inqaba yaseSanta Catalina, inqaba engaselunxwemeni yenkulungwane ye-XNUMX ebanika umoya okhethekileyo yaye iza kubakhumbuza ngonxweme olunentlabathi lweCaribbean. Ukuba uthanda ukufota, ukongeza, kwezi lwandle uya kufumana ukutshona kwelanga okumangalisayo.
Udonga alunamakhulu amathathu anamashumi amahlanu eemitha ubude namashumi amahlanu eemitha ububanzi. Nangona kunjalo, inezindlu zangasese kunye neeshawa. Kwakhona, kuyabonakala ukuba enye yezona zikhuselweyo kuyo yonke iBay of Cadiz. Ungafika kuyo ngeenyawo ngeAvenida de la Libertad okanye ngebhayisekile ecaleni kwendlela yebhayisekile. Ude ube nendawo yokuzipakisha.
Ngokwenxalenye yayo, iLa Calita, ebekwe kwelinye icala lenqaba, imalunga neemitha ezingamakhulu amahlanu ubude kwaye imalunga neshumi elinesihlanu leemitha ububanzi. Nangona kunjalo, eyona ndlela ingcono yokufika kuyo kukudlula Indlela esuka ePuerto de Santa María ukuya eRota. Kuya kufuneka uphambuke kwisitrato esikhulu se Ukufudukela ezidolophini kweVistahermosa uze ujike ngasekhohlo. Njengeyangaphambili, ikunika izindlu zangasese kunye neeshawa.
Kwelinye icala, le ndawo yephondo laseCádiz isenolunye ulwandle. Imalunga ne IAlmirante. Nangona kunjalo, awuzukwazi ukuyonwabela, kuba ibandakanyiwe kwisiseko seRota Naval ekhankanywe ngasentla.
Ngaba likho ixesha elilungileyo lokonwabela iilwandle zasePuerto de Santa María?
Ulwandle lwaseLa Calita
Iklimatology kule ndawo yeBay of Cádiz ilungile. Ke ngoko, unokonwabela iilwandle zayo ezintle phantse unyaka wonke. Ngokukodwa, imozulu injalo subtropical-mediterranean. Ubusika bupholile kakhulu kwaye ihlobo lishushu, kodwa ngaphandle kokuba shushu kakhulu. Le yokugqibela ibangelwa yimimoya evela kuLwandlekazi lweAtlantiki.
Kodwa ngaphezu kwayo yonke into, le ndawo ibalasele ngenani elikhulu leeyure zokukhanya kwelanga: ngaphezu kwamawaka amathathu ngonyaka. Ngokwale nto, imvula inqabile (malunga ne-400 mm). Ungalibali ukuba indawo yempembelelo yeCádiz ibizwa ICosta de la Luz.
Kuyo yonke into esikuchazele yona, zombini ukuphela kwentwasahlobo kunye nokuqala kwekwindla ziyasebenza ukonwabela iilwandle zasePuerto de Santa María. Kodwa elona xesha lilungileyo lokuyenza, ngokusengqiqweni, ihlobo. Ikwalixesha apho uya kuthi udibane nabakhenkethi abaninzi, nangona ungayeki ukonwabela olu lwandle luhle kangaka.
Yintoni onokuyibona ePuerto de Santa María?
ICastillo de San Marcos, enye yezikhumbuzo eziphambili zasePuerto de Santa María
Asinakulugqiba olu khenketho kwiilwandle zale ndawo yaseCadiz ngaphandle kokukhankanya ukudlula ezinye zezikhumbuzo onokuthi uzindwendwele apho. Ababini bagqama kakhulu ePuerto de Santa María. Yeyona nto ibalulekileyo Inqaba yaseSan Marcos, itempile enqatyisiweyo eyakhiwa ngenkulungwane ye-XNUMX kwimosque endala yama-Arabhu ne IBandla eliPhambili eliPhezulu, eyakhiwe ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX, nangona yakhiwa kwakhona nge-XNUMX (ngoko ke izakhi zayo ze-baroque ezingenakuchazwa).
Kodwa unokundwendwela ezinye izikhumbuzo zenkolo nezoluntu kwidolophu yaseCadiz. Phakathi kweyokuqala, i uloyiso loonongendi, i-convents zoMoya oyiNgcwele kunye ne-Immaculate Conception okanye i-hermitage yaseSanta Clara. Kwaye, malunga nemizuzwana, i indlu Vizarron, iinqaba zase-Araníbar, iiCharger ukuya kwi-Indies kunye ne-Álvarez-Cuevas okanye i-Old Lonja del Puerto.
Ukuqukumbela, sikubonise okona kulungileyo iilwandle zasePuerto de Santa Maria. Zonke zilungile kwaye zineenkonzo ezininzi. Kodwa thatha ithuba lotyelelo lwakho kwisixeko saseCadiz ukonwabela izikhumbuzo zaso. Ngaba awufuni ukwazi le ndawo ikhethekileyo yaseSpain?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo ezibalekayo eYurophu » España » Iilwandle zasePuerto de Santa María
Iidolophu zamaxesha aphakathi eSpain
eyona yokutyela ibiza kakhulu ehlabathini